Askarta ONLF oo lagu daray ciidamada deegaanka | Saxil News Network
Askarta ONLF oo lagu daray ciidamada deegaanka
Image captionQaar ka mid ah ciidamada ONLF
Tan iyo markii ay heshiiyeen dowladda Itoobiya iyo jabhadda ONLF ayaa waxa muuqatay in labada dhinac ay aad isugu soo dhawaanayeen.
Xaflad xalay ka dhacday magaalada Jigjiga ayaa lagu mideyay ciidammada deegaanka iyo kuwa jabhadda ONLF, oo markii hore gooni u degenaa tan iyo markii ay yimaadeen deegaanka.
Waxaa xafladda ka soo qeyb galay saraakiil sarsare oo ka tirsan ONLF, odayaal dhaqameedyo, hogaamiyaasha bulshada iyo saraakiil ka tirsan Dawlad Deegaanka Soomaalida Itoobiya.
“Kun toddobo boqol iyo afartan dagaalamyaal ka tirsan ONLF ayaa la midoowday ciidamada deegaanka”, Fana ayaa sidaasi sheegtay.
Wariyaha BBC-da ee magaalada Jigjiga, Cabdinaaisr sheikh Maxamed Xikam oo arrintan ka wareystay Admiraal Maxamed Cumar Cismaan oo ah gudoomiyaha Jabhada O.N.L.F ayuu u sheegay in aad ugu faraxsanyhay in la qabto xaflad lagu mideeynayo Somaalida deggen dawlad deegaanka Soomaalida.
Image captionMaxamed Cumar Cismaan wareysi siinaya weriye Cabdinaaisr sheikh Maxamed Xikam
“Waa xaflad soo dhameeystirtay halgankii dheeraa ee muddada dheer socday, guulihii umadda ay hiigsanysayna wax badan ayaa laga gaaray”, ayuu yiri Maxamed Cumar Cismaan.
“Waa markii ugu horreeysay ee fursad noocaan tan la mid ah ay isugu yimaadaan dhamaan ururradii gobanima doonka iyo dhammaan shacabka oo ay hadafkoda ku gaaran hab nabad-galyo ah”, ayuu intaasi ku daray Mr Maxamed.
Lahaanshaha sawirkaMUSTAFA OMER/TWITTER
Image captionWadahadalka Asmara ee Itoobiya iyo Ururka ONLF